လာမယ့် ဆယ်နှစ်အကြာကစလို့ လျှပ်စစ်ကားတွေကိုပဲ သီးသန့်ရောင်းချသွားတော့မယ် ဆိုတဲ့ Nissan! – MyMedia Myanmar
လာမယ့် ဆယ်နှစ်အကြာကစလို့ လျှပ်စစ်ကားတွေကိုပဲ သီးသန့်ရောင်းချသွားတော့မယ် ဆိုတဲ့ Nissan!
သေချာပါတယ် ၊ ကားလောကကြီးရဲ့ အနာဂါတ် တစ်ခုလုံးကတော့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးစွဲရေးပါပဲ။ လာမယ့် ၂ နှစ် အတွင်းမှာတော့ လျှပ် စစ်ကား ရောင်းချရမှုဟာ သာမန် ဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံး ကားတွေ ရောင်းချရမှုရဲ့ ရောင်းအားကို သိသိသာသာ ကျော်တက်သွားနိုင်ပြီလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ အခု ဆိုရင်တော့ Brand အကုန်လုံး နီးပါး ကလည်း လျှပ်စစ် စွမ်းအင် သုံးစွဲ ရေးနဲ့ ပက်သက်လို့ အာမခံချက် ကိုယ်စီနဲ့ ကြိုးစားနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Volkswagen ကလည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကို ရည်ညွှန်းမယ့် Logo ကို ပြောင်းလဲခဲ့သလို Hyundai ဟာ ဆိုရင်လည်း Ioniq Sub-Brand ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အတွက် တည်ထောင်ထားပြီးခဲ့ပါပြီ။ Nissan ကလည်း လျှပ်စစ်ကား ဆောက်လုပ် ရေးတွေ ပိုမို အာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ အတွက် Logo ပြောင်းလဲ ဖို့ လုပ်ဆောင် နေခဲ့သလို ထူးခြားတာကတော့ သာမန်လိုမျိုး လျှပ်စစ် ကားတွေပိုမို ရောင်းချ နိုင်ဖို့အတွက် အားထည့် ကြိုးစားတာထက်ကို ပိုပြီးတော့ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အတွက်ကို ကြိုးစားမယ့်အနေအထား ဖြစ်ပါ တယ်။
အခုဆိုရင်တော့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့နာမည်ကြီး ကားကုမ္ပဏီဟာ သူတို့ရဲ့ ‌ဈေးကွက်အတွင်း လက်ရှိ ရောင်းချနေကြတဲ့ အဓိကကား အမျိုးအစား တွေ ကိုတော့ လာမယ့် ၂၀၃၀ အစောပိုင်း လောက်က စပြီး လျှပ်စစ်ကားတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားဖို့ စီစဉ်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး လျှပ်စစ်ကား ဈေးကွက် ကို ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေကြတာဟာ ဆိုရင် ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ၂၀၅၀ ခုနှစ် မတိုင်ခင် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု လုံးဝ မရှိအောင် လို့ ကြိုးစားရည်မှန်းနေတဲ့ အနေအထားရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အခုလို ကားတွေ အဓိက ဖြန့်ချီလာနိုင် မယ့် အဓိကဈေးကွက်ကို သိဖို့ လိုနေပါသေးတယ်။ အဆိုပါ ဈေးကွက် တွေကတော့ ဂျပန် ၊ တရုတ် ၊ အမေရိက ဈေးကွက်နဲ့ ဥရောပ ဈေး ကွက်တို့ပဲ ဖြစ်ကာ အခြားသော ဈေးကွက် တွေ ဟာ ဆိုရင်လည်း ဂျပန် ကုမ္ပဏီ အတွက် တကယ့်ကို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ နဲ့ ဆက်လက် ကြိုး စားလာမယ့် ခြေလှမ်းတွေအဖြစ် မြင်တွေ့ နေရပါတယ်။ အခုအနေအထားဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ခြေလှမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ အခုလိုမျိုး ဈေးကွက်တွေကို ‌ခြေလှမ်းအရှိန်မြှင့်နေရခြင်းဟာ ကမ္ဘာ့ရဲ့ တတိယမြောက် ကားဈေးကွက် အနေအထားတွေမှာ တစ်ဆင့်ခံ အခြေအနေတွေသာ ရှိနေသေးပြီး လျှပ်စစ် ကားတွေကို အမြောက်အများ ထုတ်လုပ် လာနိုင်ဖို့ အတွက် ပြီးပြည့်စုံနဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦတွေ များများစားစား မရှိသေးတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ကာ Nissan ဘက်ကလည်း ဒါကို လက်ဦးမှု ရယူချင် နေတာပါ။ ဒါ့အပြင် အခြားဈေးကွက်တွေ အတွင်းမှာလည်း ဝယ်ယူသူတွေ အနေနဲ့ Pickup ကားတွေ ၊ အခြေခံ Sedans တွေနဲ့ Hatch တွေ ကို ပိုမို အားပေး နေဆဲ အနေအထားဖြစ်တာကြောင့် Nissan ရဲ့ အစီအစဉ် တစ်ချို့ဟာလည်း ဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိနေပြန်ပါ သေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍဘက်ကို ကူးပြောင်းတာဟာ အခုချိန်မှာ အမှန်ကန်ဆုံး လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ Tesla ကုမ္ပဏီ ကတော့ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် ထဲမှာတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Nissan နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ပိုပြီး ရောင်းချရမှု နည်းနေသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး သိပ်နာမည်မရသေးတဲ့ အချို့သော ဈေးကွက် အသစ်တွေမှာသာ Nissan ဘက်က လက်ဦး မှု ရလာနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဈေးကွက်ပြိုင်ပွဲက အတော်လေး ကြည့်ကောင်းလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို အနေအထား မှာ ကားစိတ်ဝင် စားသူတွေ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် နဲ့ ပက်သက်ပြီး အာရုံစိုက်နေတာ ကြတာ ကတော့ Nissan Leaf ဖြစ်ပြီး GT-R ထက် တောင် ပိုပြီး အလေး ပေးခံ နေရတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘာပဲပြောပြော Nissan အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီ ပိုင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ဒါမှမဟုတ် Hybrid Super Sport ကားတွေ ကို သာ ထုတ်လုပ်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ဖူး ဆိုရင်တော့ အခွင့်အရေးကောင်း တစ်ရပ်ဆုံးရှုံး ရလိမ့်မယ်လို့ပဲ ခန့်မှန်းရမှာပါ။ အခု လိုမျိုး ဈေးကွက် လိုအပ်ချက်အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးရင်တောင်မှ ကုမ္ပဏီ ဘက်ကနေ မကြာမီ လောက်မှာ ပြင်ဆင်မှု တစ်ခုခုတော့ ပြုလုပ်လာဖို့ အတွက် မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုလို ခြေလှမ်းတွေ ခပ်စိပ်စိပ် လှမ်းလာနိုင်မှသာလျှင် ယခင်က ဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ Nissan ရဲ့ နည်းပညာ အသစ်အဆန်း တွေကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Solid State Battery တွေ အဖြစ် တီထွင်တာနဲ့ e-POWER Hybrid နည်းပညာ တွေကိုပါ တစ်ပါတည်း နေရာ ရလာနိုင်မှာပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ က ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ ကားအပိုင်းနဲ့ ပတ် သက်လာရင် သင်ယူလေ့လာမှုနဲ့ နည်းပညာ ဆန်းသစ်မှု အပိုင်းမှာ အတော်လေး အားကောင်းလေ့ရှိတာ ကြောင့်မို့လို့ Nissan အနေနဲ့ လည်း အခု လက်ရှိ အနေအထားမှာ ရောင်းချနေတဲ့ ကားတွေထက် အများကြီး သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံးတဲ့ ခေတ်ကို အောင်အောင် မြင်မြင် ကူးပြောင်းပေးလိုက်နိုင်လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
The post လာမယ့် ဆယ်နှစ်အကြာကစလို့ လျှပ်စစ်ကားတွေကိုပဲ သီးသန့်ရောင်းချသွားတော့မယ် ဆိုတဲ့ Nissan! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-29T14:00:35+06:30January 29th, 2021|MYCARS MYANMAR|